Best 4 Software nyefee faịlụ ka / si gị akporo ekwentị site na eriri USB t
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihichapụ ozi dị mkpa si gị gam akporo ngwaọrụ, i nwere ike iji ma kpamkpam azụ ya jidesie gị na kọmputa, ka unu nwere ike mgbe niile naghachi ya. Ma ọ bụ ị pụrụ nanị chọrọ nyefee foto site na ụbọchị gị na osimiri jidesie gị na kọmputa.
Otú ọ dị, n'ihi na-emeghe ọdịdị nke Google gam akporo sistemụ, e nwere ọtụtụ software dị na ịhụ na-enyere gi aka jikwaa Android ngwaọrụ site na kọmputa gị. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-ele anya na ụfọdụ ndị kasị mma Android software management software dị. Rịba ama na ndị a niile software eme ka i nwee kpamkpam ndabere ngwaọrụ gị jidesie gị na kọmputa na iji eriri USB, nakwa dị ka ikwe nhọrọ nke kpọmkwem faịlụ jidesie gị na kọmputa. Ma, ụfọdụ dị mma karịa ndị ọzọ.
1. Mobogenie - N'ihi na Windows 2. MoboRobo - N'ihi na Windows 3. Wondershare MobileGo for Android - N'ihi na Windows 4. Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) - N'ihi Mac
1. Mobogenie - N'ihi na Windows
Iwepụ ngwaahịa ngwa ọdịnala na batches.
Mfe ibudata ma jikwaa ngwa.
Mfe nyefee multiple faịlụ site na gị PC gị Android, na Anglịkan.
Naanị jikọọ otu Android ngwaọrụ na oge.
Adịghị nwere integrated music òkè.
Chọọ maka Mobogenie nchọgharị gị internet, download na-agba ya, na jikọọ gị gam akporo ngwaọrụ na kọmputa. Ozugbo gị na ngwaọrụ e jikọọ, ị ga-kpaliri wụnye ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ gị mere na ngwa na-akpaghị aka ebudatara jidesie ya. Ozugbo ị dechara usoro a, ị ga na-ẹka ufọk ihuenyo:
Dị ka ndị ọzọ data management software, ị nwere ike ibudata ma wụnye ngwa jidesie gị Android ngwaọrụ site na PC. Ihe nke a bụ na ngwa nwere ike ibudata ngwa ngwa, na kwa na-enweghị na-efu gị na okwu nke data na-agagharị ebubo.
A idiocha mma bụ ikike iwepụ ngwa ọdịnala na bịara etinyegoro na ekwentị dị ka mgbe anyị na-ahụ onwe anyị na-ngwa ọdịnala na anyị na mgbe na-eji na anyị nwere ike ghara ihichapụ.
Nyefe nke foto faịlụ bụ n'ụzọ kwụ ọtọ, na ọtụtụ photos nwere ike họrọ site na kọmputa gị mbubata jidesie gị ngwaọrụ ozugbo, ma ọ bụ Anglịkan.
2. MoboRobo - N'ihi na Windows
Akwado njikọ ikuku nke ngwaọrụ na otu netwọk (ọ bụ ezie na ọkụ na-).
Akwado otutu ngwaọrụ.
Download apps jidesie ya site na ngwa ahịa.
Chọọ maka MoboRobo nchọgharị gị internet, na ibudata na-agba ya. N'elu imeghe ya, ị ga-kpaliri jikọọ gị gam akporo ngwaọrụ na iji eriri USB ma ọ bụ n'elu WiFi, na mgbe ahụ ozugbo ejikọrọ, ị ga-jụrụ ikike wụnye ngwa na gị android ngwaọrụ dị ka mma.
Ozugbo ejikọrọ, ị ga-ada ka nke a n'ụlọ page, achọpụta na nhọrọ iji iche iche na ngwaọrụ nakwa dị ka ejikọrọ site Wi-Fi.
Dị ka na Mobogenie, ozugbo na ị bụ na software, ọ bụ pụtara mfe ịnyagharịa gburugburu, na i nwere ike ime ihe niile site na-ezipụ SMS site na PC gị na-ebufe ngwa ọdịnala na kọntaktị. Otú ọ dị, a drawback bụ na njikwa gị music-achọ ka ị nwere gị niile MP3 faịlụ gị PC na-akpụ akpụ ha na-software- bụghị nnọọ kemmekpa ahu, ma dị ka anyị ga-ahụ nnọọ mfe ngwọta adị.
3. Wondershare MobileGo for Android - N'ihi na Windows
Mfe iwekota dum iTunes n'ọbá akwụkwọ na a click.
Tinye multiple online onwunwe na ngwa na-echekwa.
Na-arụ ọrụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa ma ọ bụ incredibly ike.
Kwado na-screenshots nke ngwaọrụ.
Tọghata video formats.
Ọ bụghị free (aka 15 ụbọchị nke free). Otú ọ dị, n'ihi na price ị ga-esi ka nnọọ keukwu na ngwa ngwa ọrụ.
N'ụlọ peeji nke Wondershare MobileGo for Android ozugbo ngwaọrụ gị e jikọọ. Rịba ama otú ọ na-egosiputa otu oyiyi ahụ bụ na ihuenyo nke ngwaọrụ gị, na-eme ka ị were screenshots. Ọzọkwa, tinyere n'aka ekpe sidebar menu ị ga-achọpụta na ọ nwere ike jikọọ otutu ngwaọrụ, nakwa dị ka ohere na-agụnye ndị ọzọ na Web isi mmalite maka nbudata ngwa.
A nchịkọta nke ngwaọrụ nyere site MobileGo na-egosi na amara atụmatụ na nke a software provides- ihe niile bụ ihe conveniently na otu ebe, ọ na-niile were were ike na-arụ ọrụ ukwuu karịa ihe ọ bụla ọzọ software, na-azọpụta gị oge na ume.
MobileGo atụmatụ na-enye aka ngwaọrụ, dị ka De-oyiri nhọrọ, nke na-akpaghị aka na-enyocha ihe niile kọntaktị gị maka ihe ọ bụla repetitions, nke bụ mgbe niile a mmekpahu (ị na-ejedebe na oyiri kọntaktị ọ bụrụ na ị mmekọrịta gị na kọntaktị na Facebook, nakwa dị ka ama-enwe ha na ngwaọrụ gị, n'ihi na ihe atụ).
4. Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) -n'ihi Mac
Anyị na-ama-ele anya na omume na-eji na-enyere gị iji USB nyefee Android faịlụ site na Windows na kọmputa. Ugbu a, anyị ga-ele anya na ngwọta maka ndị nwere Macs.
E nwere ọtụtụ management mmemme iji nyere aka ị jikwaa gị Android si gị Mac. Ndị kasị ewu ewu bụ: Android File Nyefee, Kies maka Mac (mere site Samsung maka Samsung ntị), na WonderShare MobileGo for Android Pro (Mac). A nsogbu bụ Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ha bụ ejighị n'aka na mgbe na-chọta gị Android ngwaọrụ.
Otu ihe dị mkpa iji mara bụ na iji ka Android File Nyefee na-arụ ọrụ niile, Kies gaghị arụnyere na gị na device- nanị-etinye ya "ahịhịa" abụghị zuru ezu, ọ ga-kpamkpam uninstalled. Anyị na-akwado na iji CleanMyMac ime nke a, nke nwere ike ibudata for free. Ọtụtụ ndị na-chọọ Google achọ ngwọta ka ihe mere Android File Nyefee na-adịghị arụ ọrụ, ma nnọọ ole na ole blọọgụ ma ọ bụ isiokwu banyere a dị oké mkpa zuru ezu. Ma, ọbụna ma ọ bụrụ gbazie, Android File Nyefee ka nwere ike ịbụ unreliable.
N'otu aka ahụ, Samsungs Kies yiri ka kama "kụrụ na-agha" n'ihi na ọtụtụ ndị na, na ọtụtụ forums na blọọgụ featuring commenters bụ ndị na-jikọọ ha ngwaọrụ.
N'ihi nke a, anyị nwere ike ikwu na ojiji nke Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac), dị ka ọ bụ ihe a pụrụ ịdabere na-enye a dị mfe ọrụ-enyi na enyi interface na-enye gị jikwaa gị Android ngwaọrụ na ala.
Ozugbo ị ibudatara na meghere software, jikọọ gị Android ngwaọrụ site na a eriri USB, ị ga-abịa n'ụlọ peeji egosipụta n'okpuru. Si ebe a, ị nwere ike ndabere gị dum ekwentị, nakwa dị ka jikwaa gị music, ngwa ọdịnala, videos, foto na kọntaktị.
gị dum ekwentị, nakwa dị ka jikwaa gị music, ngwa ọdịnala, videos, foto na kọntaktị. Mfe jikwaa gị niile foto. Ọtụtụ mgbe, mgbe na ezumike, ị ga-photos ụfọdụ nke ụwa kasị ịtụnanya saịtị. Ị na-achọghị n'ihe ize ndụ adịkwa ndị a dị ịtụnanya foto, na na Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac), ị nwere ike mfe kwado ha ruo gị Mac.
Na nchịkọta, ndị a niile software ngwa inye ihe dị mfe na-eji interface aka ime Android faịlụ nyefe na eriri USB na kọmputa gị. Ajụjụ-abịa ala ma ị chọrọ a ike, ngwa ngwa, pụrụ ịdabere na ọrụ na nza nke oge na-azọpụta mgbakwunye gụnyere na-abịa mgbe a price, ma ọ bụ a na-erughị pụrụ ịdabere na iji nwayọọ. Anyị na-akwado na free version nke Wondershare MobileGo for Android, ikwe ị na-ekpebi ma ya elu arụmọrụ bụ uru na-eri.
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Android Photos
Ịgbanwee faịlụ site Nokia ka Android
Olee otú iji tọghata WAV ka MP3 maka Google Music
> Resource> Android> Best 4 Software nyefee faịlụ ka / si gị akporo ekwentị site na eriri USB